Maraoka: Mahatakatra Ny Sazin’i Mohammed Raji · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2018 14:07 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Septambra taona 2008 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Herintaona latsaka izay, nanamarika ny Global Voices fa “faritra malalaka amin'ny fahalalahana miteny ao Afrika Avaratra Miozolomana” i Maraoka. Tsy manitatra raha hilaza fa anisan'ny tsara indrindra amin'ny fahalalahana miteny ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana/Afrika Avaratra (MENA) i Maraoka.
Na dia izany aza, matetika voasazy na nosamborina ireo mpanao gazety, ary omaly, nanatevin-daharana (nosamborina) ny bilaogera iray, Mohammed Raji. Nosamborina omaly tolakandro ity bilaogera ity noho ny faniratsirany ny mpanjaka, ary notsaraina avy hatrany ka nogadraina roa taona an-tranomaizina sy mandoa onitra 5000 MAD (eo ho eo amin'ny 625 dolara). Nivondrona hanohana an'i Raji ny tontolon'ny bilaogy Maraokana, mavitrika tahaka ny hatramin'izay.
Mitsikera ny fomba fitantanana feno fihatsarambelatsihy atao amin'ny gazety sy ny bilaogera ao Maraoka i A Moro in America, izay anisan'ireo voalohany nitatitra ny tantara tao amin'ny bilaoginy:
Toa tsy mahafantatra tsara ny haben'ny akon'ny haino aman-jery ateraky ny fisamborana bilaogera ny Polisin'ny Aterineto Maraokana, izay toa manao asa goavana manenjika ny tontolon'ny bilaogy Maraokana. Na satria izy ireo miasa ho an'ny lehibeny, izay mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny penina sy taratasy, ary mbola mandray ny aterineto ho tsinontsinona afa-tsy tontolo virtoaly fotsiny, na izy ireo jamban’ ny hafanam-po sy ny faniriana hahazoa valisoa noho ny fanaovana “fisamboarana goavana” tahaka izao. “
Tsy takatr'izy ireo fa manosika an'i Maraoka ho any amin'ny lisitr'ireo mpandika lalàna lehibe amin'ny fahalalahana miteny ao anaty aterineto izy ireo.
Na ratsy kokoa, maneho ny tsy fahaizana mitantana momba ny Maraokana maneho ny heviny an-tserasera izany. Nanomboka tamin'ny fanakanana ny fidirana ao amin'ny tranonkala YouTube sy Google Earth, ny fisamborana an'ilay lazaina fa printsy hosoka ao amin'ny Facebook, Fuad Mourtada, ary amin'izao fotoana izao, ny fanasaziana an'ilay bilaogera Raji roa taona an-tranomaizina. Azo antoka fa hifarana amin'ny toe-javatra tahaka ny tamin'i Fuad Mourtada ity farany ity. Nanao ny fisamborana ny polisy. Nivoaka manerantany ny vaovao, nandoto ny endriky ny Maraokana maoderina ao anatin'ny tetezamita demaokratika tanteraka, ary avy eo mahazo famotsoran-keloka avy amin'ny mpanjaka amin'ny andron'ny Eid ilay ahiahiana. Antsoina hoe dokambarotra ratsy manasazy tena izany izay azon'ny Maraoka tamin'ny tranga goavana toy izany.
Mbola mampiditra ny Maraokana amin'ireo fisamborana lehibe noho ny fanehoan-kevitra ny Fitsarana Maraokana sy ny Polisin'ny Aterineto.
Mpanoratra sady bilaogera Laila Lalami naneho teboka ilaina:
Manamarika ny fotoana voalohany nisamborana olona noho ny lahatsoratra bilaogy tao Maraoka ny fisamborana, ary manoloana ny governemantan'i Maraoka mora tohina, azoko antoka fa tsy farany izao. Saingy te-hanasongadina teboka kely iray aho: Maivana kokoa ny tsikerain'i Erraji raha oharina amin'ny lahatsoratra azon'ny mpamaky vakiana ao amin'ny gazetiboky Maraokana amin'ny teny Frantsay, tahaka ny Tel Quel na Le Journal. Saingy tohanan'ny vondrona iraisam-pirenena maro (toy ny Reporters Sans Frontières) ireo gazetiboky ireo ka matetika mila mieritreritra im-betsaka ny governemanta alohan'ny hisamborana ny iray amin'ireo mpanao gazety na mpamoaka lahatsoratra. Fa satria manoratra amin'ny teny Arabo i Erraji , ary satria manoratra ho an'ny Hespress izy, tranonkala tsy dia tsara kalitao loatra (mpandrendri-bahoaka tanteraka sy tsy marina indraindray), ary satria tsy anisan'ny [mpisera aterineto] sangany izy, nolavina tsotr'izao ny zony ho an'ny fahalalaham-pitenenana ary vao mainka ratsy tantana noho ny mahazatra ny raharaha mahakasika azy.
Nisy tranonkala natsangana hiarovana an'i Erraji: Help Erraji. Tiako mba hisy tranonkala hanampiana an'i Maraoka hahazo aingam-panahy amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety.
Citoyen Hmida, manamarika ny raharaha [fr], nilaza hoe:
Aiza ny ratsy amin'izany rehetra izany?
Ao amin'ny teny fanolorana ny lahatsoratra, angamba tokony nampiditra tantara fohy efa naverin'ny gazety izy!
Azo hamarinina ve ny heloka bevava? Misy antony handraisan'ny daholobe fepetra ve?
Azo hamarinina ve ny fanoherana ny fandanjalanjana marefo eo amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fanirian'ny andrim-panjakana sasany hiaro ny fitondram-panjaka izay tsy misy manohitra?
Andeha antenaina fa hevi-diso lalina ity tantara manontolo ity!
Ankoatra an'i Mohamed Erraji sy ireo hevitra narosony, tsy mila raharaha vaovao diso i MARAOKA.
Miandry antsika ny olana lehibe kokoa….
Farany,nanangona ny lisitr'ireo bilaogera manadihady ny raharaha momba an'i Raji, ary koa ireo rohy mankany amin'ny lahatsoratra samihafa momba ny fahalalahan'ny gazety ao Maraoka (na ny tsy fisian'izany) i Ibn Kafka. Nanamarika ihany koa izy fa, ara-teknika, niala moramora i Raji:
… Na izany aza, tokony homarihana fa nahazo tombontsoa tamin'ny lazan'ny maha ara-dalàna ny fitsarana Maraokana i Margammed Erraji, ka voaheloka higadra roa taona, raha telo taona ny sazy kely indrindra tamin'ity heloka ity, ary dimy taona farafahabetsany. Midika izany fa amin'ny teoria (amin'ny fampiharana, mampihatra ny zavatra toriny ny mpitsara), noraisina ireo toe-javatra manalefaka ny sazy – saingy inona avy?